रवि लामिछानेको समर्थनमा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न उक्साउने को हुन् ? – Vision Khabar
रवि लामिछानेको समर्थनमा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न उक्साउने को हुन् ?
प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ २, २०७६ || 285 Views || |
काठमाडौँ। पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा चितवनमा जारी प्रदर्शनमा विभिन्न तत्वको घुसपैठ रहेको तथ्य फेला परेको छ । पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उनको समर्थनका नाममा भइरहेको प्रदर्शनमा घुसपैठ रहेको प्रहरी दाबी छ ।
प्रहरीले आज मात्र घुसपैठमा संलग्न दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । चितवन प्रहरी स्रोतका अनुसार सुरज श्रेष्ठ र मोहन खतिवडालाई आज दिउँसो पक्राउ गरि कानुनी कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ ।
यसअघि राजावादी, राप्रपा र काँग्रेसनिक केही व्यक्तिहरु घुसपैठ भएको भिडियोहरु सार्वजनिक भएपनि स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको थिएन । तर, पछिल्लोपटक घुसपैठमा संलग्न दुई जना पक्राउ परेसँगै विभिन्न तत्वको घुसपैठ पुष्टि भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीहरु कुन समूहसँग संलग्न छन् र कोबाट परिचालित छन् भनेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुले भीडलाई उत्तेजित बनाउने, हुलदंगा गर्ने, तोडफोडका लागि उकास्ने र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाउने जस्ता काम गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रदर्शनकै क्रममा केहीदिनअघि प्रहरीमाथि आक्रमण हुँदा एकजना असईसहित पाँच जना प्रहरी घाइते भएका थिए । पत्रकार पुडासैनीले आत्हमत्या गर्नुअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा ‘सिधा कुरा जनता’सँगका कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछाने, संवाददाता युवराज कँडेल र रुकु भन्ने नर्स अस्मिता कार्कीका कारण मर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका थिए ।
विभिन्न कानुनी र वैज्ञानिक प्रक्रिया पुरा गरेर प्रहरीले पुडासैनीको आत्महत्या भएको १० दिनपछि यी तीन जनालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
परिवारको तर्फबाट लामिछाने, कँडेल र कार्की्विरुद्ध किटानी जाहेरी समेत परिसकेको छ । पुडासैनी गएको साउन २० गते नारायणगढको एक होटमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए ।
रविका समर्थकहरुले पुडासैनकीको आत्महत्या नभई हत्या भएको र यसमा रविलाई फसाउन खोजिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर, पोष्टमार्टम रिर्पाेटअनुसार पुडासैनीले आत्महत्या गरेको पुष्टि भइसकेको छ भने प्रहरीले समेत उनले आत्महत्या गर्नुअघि पाँच मिटर डोरी किनेर लिएको सीसीटिभी फुटेज फेला पारिसकेको छ । दैनिक नेपालबाट
PREVIOUS POST Previous post: पुडासैनीकी श्रीमतीद्धारा रवि लामिछानेसहित ३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी
NEXT POST Next post: स्थानिय सभाले गाउँपालिकालाइ ध्यानाकर्षण गराउने